Nhau - nyore kufurirwa iron pipe fittings
Tiri nyanzvi mugadziri we nyore kufurirwa simbi mutopota Fittings muChina, ane makore anopfuura makumi matatu mundima iyi. Izvo zvinhu zvinotumirwa kunze kwenyika zhinji, senge, United Kingdom, Poland, Russia, Australia, Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia etc. Vazhinji vevatengi isu takamisa kubatana kwakanaka uye kwenguva refu.
Heano mamwe edu makuru zvigadzirwa ruzivo: nyore kufurirwa simbi mutopota Fittings (izvo zvinogona kukamurwa mumatanho matatu: American mureza, Din standard yeBritish standard, ayo saizi anobva 1/8 `` kusvika 6 ''); Tube anosungisa; Mhepo hosi yekubatanidza; Camlock couplings; Carbon simbi pombi minyatso uye Magetsi magetsi fittings, zvese izvo zvigadzirwa zvinogadzira conduit fittings ine SDH brand. Kunze kwezvo, isu takamisa mhando yehunhu inoenderana neIS0 9001: 2008 uye takave nechitupa cheCRN muCanada, European yeEC uye Turkey yeTSE.
Kuti usangane nezvinodiwa nevatengi isu zvakare tinogona kuvhura iyo nyowani muforoma yechinhu chitsva chigadzirwa, kana iwe uine chinhu chitsva chemuenzaniso kana kudhirowa, gamuchira nesu. Iyo yakanaka dhizaini uye nyowani sampuli inogona kuve yekupa yekusimbisa kwako. Isu tine yedu timu yehunyanzvi yekugadzira dhizaini uye kuve neyedu yekukanda musangano kuti tiongorore muyenzaniso. Pakutanga isu tinoshandisa dema jecha chakuvhuvhu, ikozvino zvese zvakagadziridzwa kushandisa yero jecha muforoma, pamusoro pacho panotsvedzerera zvakanyanya, zvigadzirwa zvakawanda tinoshandisawo iyo CNC muchina kuve nechokwadi kuti saizi yakanyatsoita. Isu tinewo yedu QC department yekuyedza zvinhu mukugadzira. Iyo yakakosha mhete yegeji, tambo yegeji, kuyedza tambo, iyo angle gauge kuyedza iyo kona kuve nechokwadi chekuti zvinhu zvese zvinogona kusvika pamwero zvino zvinogona kutumira.
Yemakwikwi mutengo, hwakanakisa mhando, yakawanda sitoko uye nekukurumidza kuendesa ndiwo mukana wedu mukuru. Tariro kuti isu tinogona kuvaka bhizinesi kubatana mune ramangwana.
Stainless Simbi Minyatso, Mhepo Hose yekubatanidza Europen Rudzi, Stainless Simbi Pipe Minyatso, Air Hose payakabatanidzwa, Kubatanidza Air Hose, Stainless Simbi Minyatso Uye Fittings,